Ishiya imibuzo engaphenduleki eyokunqatshwelwa kweChiefs ukungena eMorocco - Impempe
Ishiya imibuzo engaphenduleki eyokunqatshwelwa kweChiefs ukungena eMorocco
February 11, 2021 Impempe.com
Umhlaziyi webhola lase-Afrika, uCudjoe Amankwa
‘Ngabe iMorocco iyomvimba yini uPatrice Motsepe ukuthi angene kuleliya lizwe uma sekuyokhethwa ozoba ngumengameli weConfederation of African Football (CAF) ngoMashi 12?’
Lona ngumbuzo wenkunzi kwezokuhlaziywa kwebhola lase-Afrika uCudjoe Amankwa. Ubuza kanjena nje u-Amankwa indaba iqale ngoLwesithathu ngesikhathi iKaizer Chiefs ikhipha isitatimende ebesiveza ukuthi ngeke isahamba ngalolu suku ukuya eMorocco ngenxa yokuba nenkinga yama-visa.
IChiefs bekumele ithathe indiza ebheke eMorocco lapho ibiyolungiselela khona ukubhekana neqembu lakhona iWydad Athletic emdlalweni weCAF Champions League. Umdlalo kumele ube ngoMgqibelo ngo-9 ebusuku.
Nokho ngokwesitatimende seChiefs, akubanga khona ukuxhumana okuhle neRoyal Moroccan Football Federation (RMFF) mayelana nokulungisa ama-visa. Empeleni ngokweChiefs izame konke ukuthi ithole ama-visa ngesikhathi kodwa kwagcina kuthule ngasohlangothini lukasoseshini webhola waseMorocco.
Kuthe sekushone ilanga ngoLwesithathu kwavela ukuthi iRMFF seyiqinisekisile ukuthi iChiefs ngeke ivunyelwe ukungena eMorocco. U-Amankwa uthe lokhu kuyaphoxa kakhulu ukuthi amazwe ase-Afrika aphathane ngale ndlela kube kudlalwa umqhudelwano obaluleke kangaka.
“Wudaba olubucayi lolu futhi akulula ukuvele ukhombe ngomunwe uhlangothi olulodwa. Angazi noma iChiefs ikwenze ngesikhathi yini ukulungisa indaba yama-visa. Ngakolunye uhlangothi iMorocco njengoba ithi ngeke iyivumele iChiefs ukuthi ingene ezweni layo, ngabe kungenxa yama-visa nje kuphela?” kubuza u-Amankwa.
“Uma inkinga kungama-visa ukushaya ucingo kanye nje ulubhekise emahhovisi enxusa laseMorocco elizinze eNingizimu Afrika, bekuzophuma nesisombululo ngokushesha. Ngaphandle kwalokho iChiefs ibingaya eMorocco ingenawo ama-visa ifike iwanikwe uma ifika. Ngikhuluma ngento engiyaziyo, esengike ngayenza ngihambisana nabanye.”
Kukhona nokucabanga ukuthi iMorocco ivimba iChiefs ukuthi ingene ezweni layo nje, yingoba kuneCoronavirus. U-Amankwa uthe akumele nje iMorocco icashe ngaleli gciwane.
“IChiefs yiqembu elisezingeni eliphezulu futhi elidlala ibhola elikhokhelayo. Ukuhlolela iCoronovirus akuyona nencane inkinga. ICovid-19 akumele isetshenziswe ukucasha ngoqhekeko esinalo ebholeni lase-Afrika. Kuyinto ephoxayo nje ukuthi e-Afrika asibumbene nakancane. Ukube bengiyiCAF bengizobhekana ngqo neMorocco mayelana nalolu daba,” kusho u-Amankwa.
Ube esephetha ngokuthi ufuna ukubona ukuthi kuzokwenzekani ngoMashi 12 uma sekuyokhethwa umengameli weCAF khona eMorocco.
“Ngesikhathi ngifunda lolu daba into efike kuqala emqondweni wami ukhetho oluzayo lweCAF. UPatrice Motsepe (umengameli weMamelodi Sundowns) uyobe ehamba nethimba lakhe ukuya eMorocco njengoba egaqele isikhundla sokuba umengameli weCAF. Ngabe bayobancisha ama-visa nomake babavimbe ngoba nakhu kuneCoronavirus?”uphethe ngokuza lo mbuzo u-Amankwa.
Email: sihle@impempe.com – Twitter: @impempe_com
CAF Champions League, Ezakamuva, Ibhola lomhlaba, iDStv Premiership
Previous Previous post: ‘Asikho isitobha esidlula uSibisi kwiPremiership njengamanje,’ kusho uNcikazi we-Arrows
Next Next post: I-CAF isinqume ukuwuhlehlisa oweWydad neChiefs